Baadhayaal ajaaniib ah oo Dowlada Kenya ka caawinayay ogaanshiyaha sida uu u dhacay Weerarkii Westgate Mall todobaadkii hore lagu qaaday ayaa ku hanjabay….. | Salaan Media
Baadhayaal ajaaniib ah oo Dowlada Kenya ka caawinayay ogaanshiyaha sida uu u dhacay Weerarkii Westgate Mall todobaadkii hore lagu qaaday ayaa ku hanjabay…..
Baadhayaal ajaaniib ah oo Dowlada Kenya ka caawinayay ogaanshiyaha sida uu u dhacay Weerarkii Westgate Mall todobaadkii hore lagu qaaday ayaa ku hanjabay in howsha ay wadaan ay joojinayaan ayna dalka ka baxayaan hadii aysan Dowlada Kenya kusoo wareejin meydadka rag ay sheegeen in lagu dilay Howlgalkii Westgate Mall.
Baarayaashani ajaaniibta ah oo ka kala socda dalalka Canada, Jarmalka ,Israel iyo Maraykanka ayaa Dowlada Kenya ka codsaday in ay Keento meydadka Shan Xubnood ay sheegeen Ciidamada Kenya in ay dileen kuwaa oo ka mid ahaa ragii weerarka ka geestay.
Kooxdan Baarayaasha ayaa Dowlada Kenya waxa ay ku eedeeyeen in ay ka caga jiideeso keenida Meydadka Shanta Qof ay Dowlada Kenya sheegtay in ay ku dileen Howlgakii Westgate Mall si looga qaado dheecaanka DNA.
Baarayaasha ayaa doonaya in gacanta loo soo galiyo Meydadka Shanta qof ay dowlada Kenya sheegtay in ay ku dishay howlgalkii Westgate Mall si looga qaado dhiiga iyo faraha loona ogaado cida ay yihiin iyo wadamada ay u dhasheen.
Dowlada Kenya ayaa fashil iyo Fadeexo culus waxa ay ka raacday Weerarkii Dagaalyahanada Al-Shabaab ka geesteen Xarunta Westgate Mall , Dowlada Kenya ayaa marar badan ku celisay in aydileen xubno kamid ahaa Ragii Weeraray Westgate Mall, hasa ahaatee wali lama hayo Meydadkooda waxaa sidoo kale loo badinayaa in ay baxsadeen dadkii weerarka ka geestay Xarunta Ganacsiga.